Zimbabwe aid plea fails
Zimbabwe came away empty-handed today after asking a meeting of neighbouring countries for a $2bn (€1.6bn) economic rescue package.
Zimbabwe opposition sets conditions for talks
Zimbabwean government and opposition officials met in South Africa today to try to find a way out of their country’s deadly crisis.
Police raid headquarters of Mugabe's opponents
Police raided Zimbabwe’s opposition party’s headquarters and took away about 60 people following its decision to withdraw from a run-off election against Robert Mugabe.
EU more threats and Mugabe's opponent calls for courage
The EU today threatened Robert Mugabe with more sanctions as fears grew for the safety of his political opponents in the run up to next week’s election.
Zimbabwe officials begin poll recount
Zimbabwe officials began recounting ballots for a couple of dozen legislative seats today, an exercise which could overturn the opposition’s landmark victory.
Britain denies 'Brown-plot letter' to oust Mugabe
Britain today denied claims by Zimbabwe’s government of a letter from British prime minister Gordon Brown that it said proved opposition leader Morgan Tsvangirai was plotting with the UK to overthrow President Robert Mugabe.
Zimbabwe responds to strike call with crackdown
More than 30 people have been arrested in a police crackdown following a call for protest strikes in Zimbabwe.
Sócrates talks the talk but African-EU relations rocky
EU AND African leaders pledged yesterday to create a new partnership of equals at a summit marked by rows over trade and Darfur and a vitriolic attack by Zimbabwe’s Robert Mugabe on European “arrogance”.